ဒူး (gonarthrosis) ၏ Osteoarthritis - ကုသမှု။ ဒူး၏ osteoarthritis နှင့်အတူတစ်ဦးဒူးရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဒူး၏ Osteoarthritis - အကြောင်းရင်းများနှင့် gonarthrosis အပေါငျးတို့သအဆင့်မှာကုသမှု
ဒူး၏အဆစ်ကဲ့သို့သောရောဂါများ, လူနာအများစုမှာအမျိုးသမီးများဖြစ်ကြသည်, ဖြစ်ပျက်မှု၏ကြိမ်နှုန်းအခြားထိခိုက်နစ်နာအဆစ်တို့တွင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ဝိုင်းထဲမှာ, ဒေသနာမကိုအမှီ gonarthrosis ၏ arthrosis ။ ရောဂါဖွံ့ဖြိုးအဘယ်ကြောင့်သူ့ဟာသူတငျပွနှင့်ကုသပုံကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။
Osteoarthritis - ထိုအကြောင်းတရားများ
osteoarthritis ၏သဘောသဘာဝနှင့်အကြောင်းတရားများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကျနော်တို့ခန္ဓာဗေဒမှလှည့်။ အရိုး, ရွတ်, ရွတ်, သွေးကြောနှင့်အာရုံကြော - အဆိုပါဒူးအဆစ်အဆောက်အဦများအစုတခုကကိုယ်စားပြုနေပါတယ်။ ကြွက်သားတွေ - ပူးတွဲ၏အထက်ပိုင်းနယ်နိမိတ်ကတော့ပေါငျရိုး၏ distal ဆုံးသည်, အနိမ့်ကန့်သတ်ကြောင့်ရှေ့နှင့်နောက်ဖို့ကန့်သတ်သည်အထက် tibia, patella ကကိုယ်စားပြုနေပါတယ်။
မိတ်လိုက်မျက်နှာပြင် 5-6 မီလီမီတာအရာအထူ, အရိုးနုနှင့်အတူစီတန်း။ ဒါဟာဖွဲ့စည်းပုံတန်ဖိုး၏ function ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် flexion-extension ကိုလှုပ်ရှားမှုများကိုစဉ်အတွင်းပွတ်တိုက်မှုလျော့နည်းစေသည်။ Power ကအရိုးနုစဉ်ဆက်မပြတ်ပေးသောလိုင်းများမျက်နှာပြင် nehryaschevuyu ပူးတွဲအဆိုပါ synovial အမြှေးပါးကထုတ်လုပ်အရည်စီးဆင်းနေဖြင့်ထွက်ယူသွားတတ်၏။ ထောက်ပံ့ရေးအရိုးနု Thin တစ်လိုငွေပြမှုနှင့်အတူ၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများဆုံးရှုံး, crack နဲ့တဖြည်းဖြည်းဖြိုဖျက်, elasticity ရှုံးသည်။
Nonfunctioning အရိုးနုပုံပျက်သောနှင့် spikes နှင့်စီမံကိန်း၏ပုံစံအတွက်ကြီးထွားဖို့ခုခံကာကွယ်တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်စတင်သောအရိုးတစ်သျှူး, တခုတခုအပေါ်မှာတိုးဝန်ပြောခြင်းငှါ။ ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာဖြစ်စဉ်များကိုလည်း synovium, ရွတ်, ကြွက်သားမျှင်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုမှန်ကန်သောအနေအထားကနေပူးတွဲခြင်းနှင့်ကိုယ်လက်အင်္ဂါဝင်ရိုးသှဖေ၏လှုပ်ရှားမှုတွင်အခက်အခဲဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါကြောင့်ဒူး၏ osteoarthritis ဖွံ့ဖြိုးဆဲ။
အဆစ်ရောင်ရောဂါရောဂါဗေဒဖြစ်စဉ်များမကြာခဏအရိုးနု၏ထောက်ပံ့ရေး၏နှောင့်အယှက်မှဦးဆောင်အများအပြား launchers အချက်များ, အောက်ပါအချက်များကိုဖြစ်ခြင်းအဓိကသူတွေကိုထံမှဖြစ်ပေါ်:
ပင်ဝိသေသလက္ခဏာများ ( dysplasia );
အရိုးတို့ကို, ရွတ်, ကြွက်သား, အရိုးနု (အမည်း, ကြွက်သားညောင်း, အရိုးကျိုး, မျိုးကွဲ) ၏ဖွဲ့စည်းပုံထိခိုက်အနာတရပူးတွဲဒဏ်ရာ;
ပူးတွဲအပေါ်ဝန်အညီအမျှဖြန့်ဝေထားတဲ့အတွက် locomotor ယန္တရား, (၏ရောဂါဗေဒ ကျောရိုးဘေးတိုက်စောင်းကွေး , kyphosis , ပြားချပ်ချပ်);
လွှဲပြောင်းဒူးခွဲစိတ်မှု (ဥပမာ, ပု meniscus ၏ဖယ်ရှားရေး );
ပူးတွဲတစ်ရှူးရောင်ခြင်း (ကရလဒ်အဖြစ် အဆစ်အဆစ်၏ , အဆစ်, စနစ်တကျ lupus erythematosus, မိလ္လာကန်ရောဂါပိုး);
ခန္ဓာကိုယ်, endocrine ရောဂါဗေဒအတွက်ဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များချိုးဖောက်ခြင်း,
ဒူး၏ Osteoarthritis - လက္ခဏာများ
ရောဂါဗေဒစသည်တို့ကို, ပထမဦးဆုံးနီးပါး imperceptibly လူနာဘို့မှာတဖြည်းဖြည်းအတော်လေးဖြည်းဖြည်းချင်းဖွံ့ဖြိုး - တစ်ခါတစ်ရံတွင်, အသေးအဖွဲအဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ပြင်းထန်ရောဂါလက္ခဏာမှဦးဆောင် - မသန်စွမ်းရန်။ မည်သို့ပင်ဒူး၏ osteoarthritis ၏အကြောင်းတရားများ၏, အကောင့်ထဲသို့တစ်ရှူးရောဂါဗေဒဖြစ်စဉ်များများ၏ပြင်းထန်မှုကိုယူပြီးတစ်ဦးအထူးသဖြင့်လက်တွေ့ရုပ်ပုံအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာနိုင်ပါတယ်အသီးအသီးသောအ gonarthrosis သုံးခုဒီဂရီ, ရှိပါတယ်။
ဒူး၏ Osteoarthritis နာကျင်မှု၏တိကျသောအမျိုးအစားများအားဖြင့်အခြားပူးတွဲရောဂါဗေဒကနေမတူညီတဲ့ဖြစ်ပါသည်:
ယင်းလှုပ်ရှားမှု၏အစအဦးမှာကြွင်းသောအရာတစ်ပြည်နယ်အတွက်ရှည်လျားသောနေထိုင်ပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်သော "-နာကျင်မှု Start" နှင့်ထပ်မံပျော့ပြောင်းသို့မဟုတ် (တစ်နာရီခန့်လေးပုံတစ်ပုံပြီးနောက်) ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု၏နောက်ခံဆန့်ကျင်ပျောက်ကွယ်သွား။ ဤသည်ပြိုလဲသေးငယ်တဲ့အရိုး၏အကျိုးအပဲ့များနှင့်အရိုးနုအပ်နှံထားတဲ့အပေါ်ပွတ်တိုက် articular မျက်နှာပြင်များကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပူးတွဲလှုပ်ရှားမှုပူးတွဲဆေးတောင့်၏ပြောင်းပြန်လှန်အတွက်အဖျက်အမှုန်၏ထွတ်မှဦးဆောင်သောကြောင့်နာကျင်မှုလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။
"ပိတ်ဆို့ပူးတွဲ" - ရုတ်တရက်ကြောင့်အရိုးနုသို့မဟုတ်အရိုးတစ်ဦးချွန်ထက်သောအပိုင်းအစဖြစ်သည့် "articular mouse ကို" ၏ဖြစ်ပျက်မှုမှနာကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ ခွဲထွက်အပိုင်းအစပူးတွဲမျက်နှာပြင်များအကြား pinched, သို့မဟုတ်နူးညံ့သောတစ်ရှူးအတွက် embedded နှင့်ခဲနာကျင်မှုများနှင့်ပူးတွဲအတွက်ပင်သေးငယ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုလုပ်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။
1 ဒီဂရီ၏ Osteoarthritis
ရောဂါ၏အစမှာဒူးသေးကျန်းမာ, strain ထံမှကွဲပြားခြားနားခြင်းမရှိဖြစ်ပါတယ်။ ဒူးအဆစ် 1 ဒီဂရီ၏ Osteoarthritis သည့်အရိုးနုအာဟာရသော intraosseous သေးငယ်တဲ့ရေယာဉ်များအတွက်ချို့ယွင်းသွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သူ issushivatsya နှင့်ပါးလွှာစတင်သည်။ ဒီကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပြီးနောက်သည် Periodic မှိုင်းနာကျင်မှု, မိုးသည်းထန်စွာရုတ်သိမ်းသို့မဟုတ်ဖြောင့်မတ်အနေအထားမဟုတ်တော့နေနှင့်ဆက်နွယ်။ ထို့အပြင် patella အတွက်အနည်းငယ်ရောင်ရမ်းခြင်း။
Osteoarthritis2ဒီဂရီ
အရိုးတည်ဆောက်ပုံကိုထိခိုက်စေသည့်ရောဂါဗေဒ၏တိုးတက်မှုသည်အတိုင်း, synovium, အရိုးနုအာဟာရဖောက်ဖျက်ပိုမိုဆိုးရှားသည်။ ဒါဟာပူးတွဲဆေးတောင့်၏ယိုယွင်း, osteophytes ၏အသွင်အပြင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။2ဒီဂရီ၏ဒူးအဆစ် Osteoarthritis တိုးမြှင့်လက္ခဏာတွေဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်, နာကျင်မှုကပိုမကြာခဏဖြစ်ပေါ်, ရှည်သည် non-မရှိမဖြစ်ဝန်မှာခံစားခဲ့ရကြာရှည်ခံသည်။ လူနာတောင့်တင်း, ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်အကြပ်အတည်းအထိမ်းအမှတ်လိမ့်မည်။ ဒူးအဆစ်2ဒီဂရီ Osteoarthritis မကြာခဏဒူး၏ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ပုံပျက်သောများ၏မကြာခဏဖြစ်ပျက်မှုထင်ရှား။
Osteoarthritis3ဒီဂရီ
ဒူးအဆစ် osteoarthritis ဖွံ့ဖြိုးဆဲသောအခါ, ရောဂါလက္ခဏာရောဂါမရှိသံသယထားခဲ့ပါ။ ဒီအဆင့်မှာအရိုးနုအရွတ်များနှင့်ကြွက်သား function ကိုနှောင့်အယှက်နီးပါးပျက်ကွက်ဖြစ်ပြီး, ပူးတွဲကာကိုယ်လက်အင်္ဂါတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ပုံပျက်သော (ခြေထောက်အို-shaped သို့မဟုတ် X-shaped ဖြစ်လာဒဏ်ခတ်) လည်းမရှိ။ နာကျင်မှုအဆက်မပြတ်လူနာနှောက်ယှက်ခြင်း, ဒူးအတွက်ရွေ့လျားမှုတစ်ခုသိသာန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါသွားမတည်ငြိမ်မှု, perevalivaniem ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသည်လူနာတစ်ဦးကြံသို့မဟုတ်ချိုင်းထောက်လိုအပ်သည်။
ရောဂါမကြာခဏဒူးအဆစ်နှင့်အတူစတင်ပေမယ့်အောက်ပါဒုတိယရောဂါဗေဒလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အားဖြည့်ဝန်လိုက်လျောရန်။ ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အချိုးကျဖွံ့ဖြိုးသော်လည်း, မွေးရာပါအင်္ဂါရပ်များနှင့်ဆက်စပ်သည့်ဒူး၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်တွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူအချို့သောကိစ္စများတွင် osteoarthritis ။ ပြင်းထန်နှစ်နိုင်ငံ gonarthrosis များတွင်အဓိကအားဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများစိုးရိမ်ပူပန်နေသော၏လက္ခဏာများ, ရွှေ့ဖို့နိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးပြီးမြောက်ရန်ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။
Osteoarthritis - Diagnosis
: ရောဂါအတည်ပြုခြင်းငှါ, ဒူး၏ gonarthrosis ဖွံ့ဖြိုး၏ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ဒဏ်ရာ၏ပြင်းထန်မှုပါဝင်နိုင်ပါသည်သောရှုပ်ထွေးသောစစ်တမ်းများ, တာဝန်ပေးအပ်သူလူနာ
rentenografiyu - ပု meniscus ၏အဆင့်အတန်းနှင့်အရိုးနု (articular အလျားလိုက်အပေါက်အကျယ်) ကိုဖော်ပြပေးဘိုနီကြီးထွားလာခြင်းသည်၏ရှေ့မှောက်တွင်သို့မဟုတ်မရှိခြင်း, အရိုးပျက်စီးခြင်း၏အရိပ်လက္ခဏာ;
ဒူး၏ ultrasound နှင့်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် - ထိုပျော့တစ်ရှူးပြောင်းလဲမှုများသိရှိနိုင်ဖို့, စေး၏ပမာဏ,
ဒူး၏မှန် CT Scan ဖတ် - အရိုးအဆောက်အဦများ၏ပြောင်းလဲမှုများအသေးစိတ်လေ့လာမှုသည် ဖြစ်. ,
စေး၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ - ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာဖြစ်စဉ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအကဲဖြတ်ရန်ပူးတွဲရောင်ရမ်းခြင်းအတွက်ခန့်အပ်ထားသော;
arthroscopy - ဗီဒီယိုကင်မရာပူးတွဲလိုင်ခေါင်းထဲသို့ထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်အမြင်အာရုံစာမေးပွဲ, ကိုညွှန်ကြားဖို့လမ်း;
ဒူး၏ Osteoarthritis - ကုသမှု
တစ်ခုချင်းစီကိုအမှုအတွက်ဒူး၏ osteoarthritis ဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်အဘို့, ရောဂါရှာဖွေတိုင်းတာမှုများအပြီးဆရာဝန်ကိုပြောပြရပေမည်။ အပြုသဘောရလာဒ်များအောင်မြင်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း - ဆိုအမှု၌, သင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များနှင့်အတူအပြည့်အဝလိုက်နာအတွက်ရေရှည်ကုသမှုအတွက်ညှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကုသမှုအခြေခံပညာအခြေခံမူများပါဝင်သည်:
physiotherapeutic နည်းစနစ် (လှိုင်းနှုန်းသည် UHF, electrophoresis, phonophoresis , Diadynamic ရေစီးကြောင်း, သံလိုက်ခြင်းနှင့်လေဆာ);
ထို့အပြင်ကဒူးအဆစ် arthrosis, ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏ပုံမှန်, အဆင်ပြေဖိနပ်၏ရွေးချယ်ရေးလှုံ့ဆျောအဓိကရောဂါဗေဒ၏ကုသမှုလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ လူနာစနစ်တကျ dosed ထားပြီးအဆစ်အပေါ်အလေးပေးရန်, ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အပန်းဖြေအကြားပြောင်း, သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စုစည်းသင့်ပါတယ်။ ရှေးရိုးစွဲကုထုံးထိရောက်မှုအခါအဖျက်အပြောင်းအလဲများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါ, ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူဖို့ရွေးချယ်ကြပါတယ် - ဒူးအစားထိုး။
အဆိုပါရောင်ရမ်းခြင်း၏ဒူးအဆစ်ပုံပျက်သော arthrosis သည် Periodic ဒူးဖြင့်လိုက်ပါသွားဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကကြောင့်နေ့စဉ်ဘဝရှိလာရုံ, ဒီလက္ခဏာကို fix ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်အရေးကြီးပါသည်။ လူနာခန္ဓာကိုယ်အရည် retention ကိုဖြစ်ပေါ်ပါဘူးဒါကြောင့်ပါဝါကိုထိန်းညှိဖို့ပထမဦးဆုံးအပေါင်းတို့၏သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်ဆား, သကြား, Semi-ချောထုတ်ကုန်, အသား, ဖက်တီးအစားအစာများ၏အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
တိုက်ရိုက်ကျွမ်းကျင်သူများကမကြာခဏတွေ့ရှိရပါသည်အတွက်ဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်များတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်စွမ်းရည်မှတဆင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာ Dimexidum အတူကိစ္စ္စအောင်အကြံပြုရောင်ရမ်းခြင်းမှသက်သာရာရစေရန်။ ပိတ်ကျဲစ၏အ wetted အပိုင်းအစ Be, ညင်ညင်သာသာညှစ်နဲ့လူနာဒူးမှပူးတွဲ, ရေ Dimexidum ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ဝက်အတွင်းရော, အကြိမ်ပေါင်းများစွာခေါက်။ ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးပြီးအတူထိပ်တန်းဖုံးအုပ်, 20-40 မိနစ်ခန့်မတ်တပ်ရပ်။ လုပျထုံးလုပျနညျး 10-15 အစည်းအဝေးများ၏ညဉ့်သင်တန်းအပေါ်နေ့စဉ်ထွက်သယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဒူး၏ osteoarthritis နှင့်အတူဆီမွှေး
ဒူးအဆစ် osteoarthritis ရောဂါအခါ, ကုသမှုဆီ, gels, လိမ်းဆေး၏ပုံစံအတွက်လိမ်းပြင်ဆင်မှုတွေများအသုံးပြုမှုနှင့်အတူပါဆုံးကိစ္စများတွင်အိမ်မှာထွက်ယူသွားတတ်၏။ ဤရန်ပုံငွေများအများအပြားအမျိုးအစားသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်:
nonsteroidal antiinflammatory မူးယစ်ဆေးဝါးများ (diclofenac, Naiz, Ketonal, Indomethacin, တိုက်ခိုက်ခြင်း, Dolobene) -, analgesic ရောင်ရမ်းမှုကိုလျှော့ချ;
ပူနွေးလာမှု (Apizartron, Gevkamen, Espoli, Viprosal, Kapsikam, Finalgon) - trophism အရိုးနုနှင့်အပျော့တစ်ရှူးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကြောင့်သွေးစီးဆင်းမှု၏ဆွဖို့ analgesic အရေးယူကွိုးစားအားထု;
hondroprotektory (Chondroxide, Hondroart, Aflutop, Teraflex) - အရိုးနု restore နဲ့စေး၏ပေါင်းစပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်, ရောဂါလက္ခဏာများ၏ပြင်းထန်မှုလျှော့ချပေးပါတယ်။
ဒူးအဆစ် arthrosis သို့ထိုး - မူးယစ်ဆေးဝါးများ
ထိုကဲ့သို့သောလျှင်အဖြစ်အချို့ကိစ္စများတွင် effusion သို့မဟုတ်လေ့လာတွေ့ရှိပြင်းထန်သောနာကျင်မှု, ဒူး၏ osteoarthritis အတူဒူးအတွက်ထိုးဆေးသတ်မှတ်ထားသောရှိသေး၏။ အုပ်စုများကိုအောက်ပါ intraarticular ဆေးထိုးဆေးအတွက်အသုံးပြုနေကြသည်:
hyaluronic acid ကို (Gialurom, Sinokrom, Fermatron);
hondroprotektory (Aflutop, ဒွန်, hondrolon);
ထုံဆေး Novocain ။
Osteoarthritis - Tablet များ
တွေ့ရှိရဒူး arthrosis ရှိသည်သောလူနာမှအုပ်ချုပ်ခွင့်ရနိုင်တက်ဘလက်အဘယျသို့အေးဂျင့်ဖို့စဉ်းစားပါ:
nonsteroidal antiinflammatory မူးယစ်ဆေးဝါးများ (Diclofenac, Ibuprofen, Ketoprofen, Analgin);
hondroprotektory (Glucosamine, Chondroitin sulfate, ဒွန်, Teraflex, Piaskledin) ။
ဒူး၏ Osteoarthritis - ရိုးရာကုစား၏ကုသမှု
ရောဂါ gonarthrosis စတင်ပါလျှင်, ကုသမှု, သမားရိုးကျမဟုတ်သောနည်းလမ်းများဖြည့်ရသောအများအပြားမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ပြသပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြက်သွန်ဖြူပွတ်နယ်, ပတျဝနျးကငျြတစ်ရှူးသွေးစီးဆင်းမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အရိုးနု၏အာဟာရပုံမှန်, နာကျင်မှုနဲ့ရောင်ရမ်းမှုကိုလျှော့ချရန်ကူညီပေးသည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ - 200 မီလီဂရမ်။
ကြက်သွန်ဖြူ minced, ရေနံလောင်း။
တစ်ပါတ်အဘို့မှောင်မိုက်အရပ်၌ရေနံ tincture တစ်ဦးကွန်တိန်နာ ထား. , အခါအားလျော်စွာလှုပ်။
ဒူး၏ osteoarthritis နှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်း
ဒူး၏ osteoarthritis အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းကုထုံးစူးရှရောင်ရမ်းခြင်း၏ဖယ်ရှားရေးပြီးနောက်ထွက်သယ်ဆောင်နှင့်ပြင်းထန်သောနာကျင်မှုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းကိုတစ်နေ့ဤအချိန်ဆယ်မိနစ်ကာလအပေါ်မျှဝေ, 30-40 မိနစ်များအတွက်အဲဒါကိုခွဲဝေထားရမည်တစ်ချိန်တည်းမှာပုံမှန်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ မှန်မှန်ကန်ကန်, သွေးလှည့်ပတ် restore ကိုကူညီကြွက်သားများနှင့်အရိုးဆစ်ကိုခိုင်ခံ့စေခြင်း, articular အဆောက်အဦများ၏ function ကိုပုံမှန်ဖို့ရန်ဒူးအဆစ် osteoarthritis နှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်းရွေးချယ်ထားကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လူနာအသုံးဝင်သောလမ်းလျှောက်, ရေကူး, စက်ဘီးစီးအတန်းပိလတ်မင်းဖြစ်ကြသည်။
ဒူး arthrosis ပေါ်တွင်ပတ်တီး
ဆေးသမား, မှန်ကန်သောခန္ဓာဗေဒအနေအထားကိုသေချာစေရန်လမ်းလျှောက်လွယ်ကူချောမွေ့ရန်, ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ကူညီပေးသော, ဒူးအဆစ် osteoarthritis နှင့်အတူအထူးဒူးဝတ်ဆင်အကြံပြုပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆောင်းပါးများကိုဝတ်ထားကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ချပြီးမတိုင်မီ2မှ 8 နာရီ နေ့မှစ. ဖြစ်သင့်သည်။ ဒါဟာသင်တစ်ဦးအထူးကုနှင့်တိုင်ပင်ရန်လိုအပ်ပါသည်သောစနစ်တကျဒူး၏ osteoarthritis နှင့်အတူတစ်ဦးဒူးကိုရှေးခယျြဖို့ဘယ်လိုသိရန်အရေးကြီးပါသည်။ ထုတ်ကုန်များ, ဖွင့်ပိတ်ပြီးနှင့်အမျိုးအစားအပေါ်တွင်မူတည်ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများကို လုပ်. , ခိုင်မာသော၏ကွဲပြားခြားနားသောဒီဂရီရှိနေကြသည်။
ရောဂါဘေးဥပဒ် - ဒီရက်ရတဲ့၏အဲဒီမှာအန္တရာယ်ဖြစ်သနည်း
နှလုံးတိုက်ခိုက် - လက္ခဏာများ
သွေးတိုး 1 ဒီဂရီ
Fervex - ဖွဲ့စည်းမှု
Traumeel S - ampoule
ပဋိဇီဝဆေးကုသမှုပြီးနောက်အူလမ်းကြောင်းသစ်ပင်ပန်းမန် restore လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဆိုပါအစာပြွန်၏တိုက်စားမှု - ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကုသရေး
အရွယ်ရောက်သူများတွင်အပူချိန် 38 အောက်?
မော်စကိုအားလပ်ရက်မော်ဒယ် Irina Shayk
အမျိုးသမီးတွေအတွက် urethra ထံမှ smear
တရုတ်မော်ဒယ်မင်ရှီဟာဗစ်တိုးရီးယားရဲ့လျှို့ဝှက်ချက် Show ကို 2017 အတွင်းမှာကျဆင်း
စီရော်နယ်ဒို၏ 15 လျှို့ဝှက်ချက်များကို - ကမ္ဘာ့အလှဆုံးဘောလုံး
ဟယ်လင် Mirren: "ငါ 73 တယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ငါသာ 72 ပေါ့! ဂရိတ်သတင်း! "
Adenium - အိမ်မှာစောင့်ရှောက်မှု
ဇီဝြဖစ်အရှိန်မြှင့်ဖို့ကိုဘယ်လို - ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝြဖစ်အရှိန်မြှင့်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ
ကိုယ်ဝန် 38 ကာလအတွင်းအပူချိန်
Meringue နှင့်အတူကိတ်မုန့် "Earl အပျက်အယွင်း"
ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်ချုပ် - ငယ်ရွယ်မိခင်များအဘို့အကွံဉာဏျမြား
မိမိအကိုယ်လက်နှင့်ကိုယ်ကြောင်များအတွက်ကုပ်ခြစ် post ကိုအောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဒိန်ခဲ suluguni နှင့်အတူချက်ပြုတ်နည်း